Vaovao - Fahalalana ny harato vy tsy misy vy
Fahalalana ny harato vy tsy misy vy
Araka ny akora mahazatra, ny harato vy tsy misy fangarony dia azo zaraina amin'ny karazany roa: efijery landy sy efijery vy. Ny efijery landy dia ny efijery voalohany, ary ny lamba vy tsy miovaova dia novaina avy amin'ny lamba landy. Ny harato vy dia ampiasaina indrindra amin'ny fisavana sy ny sivana ao ambanin'ny toetran'ny asidra sy alkaly, ho an'ny efijery fotaka amin'ny indostrian'ny solika, ho an'ny efijery efijery amin'ny indostrian'ny fibre simika, ho an'ny efijery pickling ao amin'ny indostrian'ny electroplating, ary ho an'ny filtration gazy sy ranoka ary fisarahana amin'ny haino aman-jery hafa. Amin'ny ankapobeny, tariby vy harato vy, tariby nikela ary tariby varahina no ampiasaina ho fitaovana. Misy karazany dimy ny fomba fanenomana: tenona tsotra, tenona twill, tenona holandey tsotra, tenona Holandey ary tenona Reverse Holanda. Anping County dia manana traikefa famokarana lamba landy an-taonany maro, manana orinasam-pamokarana vy tsy misy fangarony, ny famokarana fanatanterahana ny sivana vy harato dia milamina, tsara ary toetra hafa. Azontsika atao ihany koa ny mamolavola sy manamboatra karazana vokatra harato vy tsy misy fangarony arakaraka ny filan'ny mpampiasa. Androany, te hampiditra karazana harato vy tsy misy fangarony aho.
Misy karazana fomba fanenomana dimy amin'ny harato tenona: tenona tsotra, tenona vita amin'ny kofehy, tenona holandey tsotra, tenona Holandey ary tenona Reverse Holanda.
1. Bolongam-by tsy misy vy:
Moa ve ny fomba fanenomana mahazatra indrindra, ny tena mampiavaka azy dia ny hakitroky ny karana sy ny savaivon'ny kofehy.
2. harato vy tsy misy vy
Stainless vy toradroa harato dia mety amin'ny solika, simika, fibre simika, fingotra, famokarana kodiarana, metallurgy, fanafody, sakafo ary indostria hafa. Ny tariby vita amin'ny vy dia voatenona ao anaty famaritana isan-karazany momba ny harato sy ny lamba, izay misy asidra tsara, alkaly, fanoherana ny hafanana avo, tanjaka mahery ary fanoherana mitafy.
3. harato matevina tsy misy vy
Fitaovana: fanenomana tariby tsy misy fangarony: harona matevina vita amin'ny vy tsy misy fangarony, kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy, volom-boninkazo vita amin'ny vy tsy misy fangarony, volony matevina vita amin'ny vy matevina. Fampisehoana: fampisehoana filtration milamina sy tsara. Fampiharana: ampiasaina amin'ny aerospace, solika, simika ary indostria hafa. Ny orinasanay dia afaka mamolavola sy manamboatra karazana vokatra isan-karazany arakaraka ny filan'ny mpampiasa
Ny famaritana ny harato vy tsy misy vy dia 20 harato - 630 harato
Ny fitaovana dia SUS304, SUS316, SUS316L, SUS302, sns.
Fampiharana: ampiasaina amin'ny fisavana sy ny sivana amin'ny tontolo asidra sy alkaly, toy ny fantson'ny fotaka ao amin'ny indostrian'ny solika, efijery fanivanana efijery ao amin'ny indostrian'ny fibre simika, ary ny jono ahazoana indostrialy
Ny harato sintering dia vita amin'ny harato dimy, ny fotony dia ny sosona sivana, ny sosona roa afovoany dia ny sosona mpitari-dalana, ny sosona roa ivelany dia ny sosona fanohanana, ny salan'isan'ny filtration minimum of sintering net dia 1 micron.
Ny fanitsiana vovoka, fantatra koa amin'ny filtration porous, dia manana fihenan'ny tsindry avo kokoa noho ny fanodinana harato tariby, ary ny fahamarinan'ny filtration dia kely kokoa. Ny sanda filtration farany ambany dia mety hahatratra 0,45 μ M
Jiro vy tsy misy fangarony: tariby vy tsy misy fangarony, tariby nikela, tariby varahina. Ampiasaina indrindra amin'ny fanivanana entona sy ranoka ary fisarahana amin'ny haino aman-jery hafa.
Ny vy vy dia mahatohitra ny hafanana, ny asidra, ny harafesina ary ny fitafiana. Noho ireo toetra ireo, ny harato vy tsy misy fangarony dia be mpampiasa amin'ny fitrandrahana, simika, sakafo, fanafody ary indostria hafa.
Sivana entona indostrialy, Sivana tsy misy vy, Sivana mandeha amin'ny fiara, Filtration amin'ny rivotra tsy miova, Sivan-drano, Sivana amin'ny rivotra,